ल क्यापसबाट आएका विद्यार्थीहरुले आगो लगाएका हुन त ? – YesKathmandu.com
स्ववियू निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आर आर क्याम्पसमा आगजानी भएसँगै अहिले माहोल बिग्रिएको छ । कतै स्ववियु निर्वाचन त हुने होइन कि भन्ने त्रास समेत पैदा भएको छ । शनिवार बेलुका आर आर क्याम्पसमा भएको आगजानीमा अखिलका विद्यार्थीहरु नेविसंघले आगजानी गरेको आरोप लगाइरहेका छन भने नेविसंघका विद्यार्थीहरु अखिललाई आरोप लगाइरहेका छन । वास्तवमा कस्ले लगाएको थियो आर आर क्याम्पसमा आगो ? एस काठमाडौं प्रतिनिधिले त्यहाँका नेताहरुसँग गरेको कुराकानी
राजकुमार राई,पूर्व स्ववियु सभापति
खासगरि ११ बजेदेखि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने त्रिविले परिपत्र जारी गरेको थियो । यसैअनुरुप हामीले हिजो पहिला मनोनयन दर्ता गर्यौं । प्रत्यक्षतर्फबाट अध्यक्ष,सचिव,कोषाध्यक्ष आठ जना सदस्य सहित १६ जना समानुपातिकका मनोनयन दर्ता गर्र्यौं । यसपछि क्रान्तिकारी र नेविसंघले पनि मनोनयन दर्ता गराए । यतिञ्जेलसम्मको माहोल ठिकै थियो तर यसपछि अचानक नयाँ शक्ति विद्यार्थी, नेविसंघ र क्रान्तिकारी (विप्लब) विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरे । अलि चर्काचर्की सुरु भयो ।
त्यतिबेला निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैंठक चलिरहेको थियो । म त्यहिँ नजिकै थिँए । नेविसंघका साथीहरु पनि आएर बसे । गफगाफका क्रममा उनीहरुले मनोनयन दर्ता यहाँ गर्ने हो भन्दै तथानाम गालिगलौज गरे । तर, हामीले मनोनयन दर्ता पहिले नै गरिसकेका थियौं । यसअघि नै स्ववियु सभापति उम्मेद्वारको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गरेर मनोनयन दर्ता भएको जानकारी गराइसकेको थिए ।
हिजो जुन घटना घट्न पुग्यो यो सिँधै गृह प्रशासनको आँडमा हुन पुगेको हो । किनकि,क्याम्पसभित्र तोडफोड हुँदा बाहिरका सुरक्षाकर्मीहरुले आँखा चिम्लेर बसे । उनीहरुले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो तर भएन । राज्यको सम्पत्ति जोगाउँन त प्रहरी प्रशानसहरु लाग्नुपर्ने हो । तर, मुकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिरहे ।
यो गृहमन्त्री निधिकै आडमा अप्रिय घटना हुन पुग्यो । त्यसैले हिजो भएको घटनाको जिम्मेवार नेविसंघले लिनुपर्दछ । बाहिर अनेरास्ववियलाई उल्टै बदनाम गराउने कोसिस गरिएको छ । तर, सत्य कुरा त्यो होइन । त्यसैले नेविसंघले विभिन्न क्याम्पसहरुमा कुन पदमा को लड्ने भनेर मनोनयन दर्ता नै गरेको छैन । यसरी उनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् र तालाबन्दी लगाउँदै आइरहेका छन् ।
नभए, किन यस्तो ? साँच्चिकै लोकतन्त्रको कुरा गर्ने उहाँहरुलाई हिजो तीन बजेसम्म मात्रै थियो नि मनोनयन दर्ता गर्ने । तर, नेविसंघ बाहेक अरुको मात्रै निर्वाचन हुँने कुरा भएन ।
हिजो झगडा हुने कुनै त्यस्तो कारण नै थिएन । उनीहरु(नेविसंघ)को के दम्भ छ भने गृहमन्त्रालय हाम्रो हातमा छ । पुलिस प्रशासनले सहयोग गर्छ भनेर अनेरास्ववियुमाथि आक्रमण गरिएको हो । तर, कुनै हालतमा त्यसो हुन दिँदैनौ । यसअघि भर्ना विहीन विद्यार्थीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा प्रकाशन गरिएको नितान्त झुट हो । किनकि सबै विद्यार्थी संगठनहरु बसेर क्याम्पसभित्रको ढड्डा नै पल्टाएर मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको हो ।
पुष्कर बास्तोला,नेविसंघ विद्यार्थी नेता
हिजो अनेरास्ववियु र नेविसंघको झडप भइरहेको थियो । तर, म सहित केही साथीहरु बाहिर थियौ । पाँच÷छ जना साथीहरु झडपमा घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएको थाहापाएपछि दौडिदै अस्पताल पुगे । पछि आर.आर क्याम्पस आइपुग्दा पाँच सय सशस्त्र प्रहरीहरु बाहिर भित्र गरिरहेका थिए । भने क्याम्पस प्रशासनका कर्मचारीहरु क्याम्पसभित्रै थिए । त्यतिबेला नेविसंघका विद्यार्थीहरु कोहीपनि क्याम्पसभित्र थिएनन् । गेटबाहिर नै थिए । उनीहरुले क्याम्पसभित्रबाट ढुङगामुडा गरे ।
पूर्व स्ववियु सभापति राजकुमार राई पनि दोषी हुन् । किनकि नेविसंघको नेतामाथि क्याम्पसभित्र हातपात गरेका छन् । हिजो उनी नै हुन्, क्याम्पसको छतमाथिबाट इट्टा हान्ने । अब, हिजोको घटनाका दोषि को हुन् ? त्यसैले कि त क्याम्पस प्रशासन कि त अनेरास्ववियु हो यसको दोषी । त्यसकारण दुवैको मिलोमतोमा हिजोको घटना हुन पुगेको हो । हामीले ध्यानाकर्षण पत्र पठाइसकेका छौं । तर, त्यसको कुनै जवाफ आइसकेको छैन ।
यदि कुनै कारणले नेविसंघले क्याम्पसभित्र आगजानी गरेको रहेछ भने त्यसको भागिदार हुन तयार छौं । जस्ले यो गल्ती गरेको छ त्यसको भागिदार हुनुपर्छ । ०६५ सालको कुरा हो । स्ववियु चुनावको कोठामा आगलागी भयो । त्यतिबेला अनेरास्ववियुले अखिल क्रान्तिकारीलाई दोष लगाइयो । अहिलेसम्म त्यो घटना थाहा हुन आएको छैन । त्यतिबेला स्ववियु सभापति उम्मेद्वार राजकुमार राई नै थिए । उनले नै अखिल क्रान्किारीमाथि आरोप लगाएका हुन् । हिजो फेरि यो हर्कत भएको छ ।
इन्द्र लामा, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी विद्यार्थी नेता
हिजो जब मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको थियो । त्यति नै बेला यो घटना घट्न पुग्यो । मनोनयन दर्ता गरिसकेका नेविसंघका विद्यार्थी संगठनले होहल्ला सुरु गर्यो । त्यसपछि एकाएक चार पाँच वटा बाइकहरु देखा प्रयो । उनीहरु को थिए अहिलेसम्म थाहा भएको छैन । उनीहरुले हेल्मेट फुकालेर सडकमा मानिसहरुमाथि हातपात गरे । त्यसपछि विद्यार्थीहरु तित्तर वित्तर भए । यसको केही समयपछि आर.आर क्याम्पसबाहिरको सडकमा नेविसंघका विद्यार्थीहरुले नाराबाजी गर्न थाले । प्रहरीले उनीहरुलाई रोक्न खोजेपनि विफल भए । नाराबाजी गर्दै क्याम्पसभित्र छिरे । प्राप्त जानकारअनुसार, ती हेल्मेटले हातपात गर्ने व्यक्तिहरु नै अघि सरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
यसपछि, क्याम्पसको छतमाथिबाट अखिलका विद्यार्थीहरुले नेविसंघमाथि ढुङगामुडा गर्न थाल्यो । सबैजनाको भागभाग मच्चियो । यसको केही समयपछि क्याम्पसभित्रको कक्षा कोठामा आगजानी हुन गयो । क्याम्पसभित्र कस्ले आगो लगायो थाहा भइसकेको छैन । तर, प्राज्ञिक क्षेत्रजस्तो स्थलमा युद्धभूमी बनाइएको छ । कसले यो हर्कत गर्यो त्यसलाई बाहिर ल्याउनु जरुरी छ ।
झिल खिम्बुले,संघीय समाजवादी विद्यार्थी नेता
आर.आर.मा जो ठूलो विद्यार्थी संगठन(अखिल,नेविसंघ)का कार्यकर्ताहरु छन् । उनीहरु स्ववियु चुनाव गर्नुभन्दा पनि गुण्डागर्दी पेशामा लागेका छन् । स्ववियुको आचारसंहिता उल्लंघन गरि विद्यार्थीहरुको पक्षमा लडिरहेको चिप्लो घसिरहेका छन् । जनपक्षिय रुपमा स्ववियु निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर भनिएपनि त्यसविपरीत कामहरु भइरहेका छन् । के आचारसंहितामा रहेर उनीहरुले यो सबै हर्कत गरेका हुन त ? त्यसो गरेको भए किन यस्तो ? आज (आइतबार) यसैका विरुद्धमा संघीय विद्यार्थी फोरम लगायतका संगठनहरुले स्ववियु चुनाव मर्यादित ढङगले हुनुपर्छ भनेर प्रेस विज्ञाप्ति जारी गरेको छ ।
वास्तवमा ठूला भनाउँदा विद्यार्थीहरुको अमूक घमण्डका कारण हिजोको घटना हुन पुगेको हो । निर्वाचन व्यक्ति तथा समितिहरुको मिलेमतोमा मनोनयन दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो यहिँ हो मुख्य कारण तर उनीहरु आफू आफू नै झगडा गरेका हुन् । हिजो क्याम्पसको कक्षाकोठाभित्रै आगलागि भयो तर अहिलेसम्म कुनै संगठनले त्यसको जिम्मेवारी लिएको छैन । यो विषयमा यथेष्ठ प्रमाण नभएकाले हामीले त्यसले नै यो हर्कत गर्यो भन्न सकिँरहेका छैनौँ । तर,यो चाहिँ पक्का हो,तिनै झोले प्रवृत्तिका कार्यकर्ताहरुले यो वितण्ड मच्चाएका हुन् । अहिले उनीहरु नै टकटकिन खोजिरहेका छन् । अब,यसको क्षतिपूर्ति उनीहरुले नतिरेर कस्ले तिर्ने ? प्राज्ञिक क्षेत्रजस्तो स्थलमा यस्तो वितण्ड मच्चाइँदासमेत क्याम्पसले कुनै चासो देखाएको छैन । कानमा तेल हालेर आराम गरिरहेको छ । जानकारीअनुसार निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रशासन यो घटनासम्बन्धि बैंठक बसेको भन्ने सुनिएको छ तर खास कुरा के हो बाहिर आइसकेको छैन । पटक पटक गरेर विभिन्न संगठनहरुले क्याम्पसका तालाबन्दी गर्ने क्रम जारी नै छ । जे भएपनि स्ववियु चुनाव हुन्छ ।
डा.निर्मलाकुमारी सुवाल, क्यापस प्रमुख
यदि समयमै त्यसो हुन सकेको थिएन भने क्याम्पस प्रशासनभित्र धेरै क्षति हुने थियो । तर,हामीले समयमै आगजानीबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्र्यौ । अहिले अरु क्षति हुन नदिन लागिपरेका छौं । सबै विद्यार्थी संगठनहरुसँग छलफल गरिरहेका छौ । हिजो छ बजेसम्म क्याम्पसभित्रै थियौ ।
सडकमा विद्यार्थीहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए । तर, एक्कासी क्याम्पसभित्र कसरी आगो लाग्यो ? यो विषयमा अहिलेसम्म केही थाहा हुन सकेको छैन । कसैले,भनेअनुसार ल क्यापसबाट आएका केही विद्यार्थीहरुले आगो लगाएको सुनेका छौ । खास कुरा के हो भन्ने विषयमा सोधखोज भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीहरु भित्र प्रवेश गर्नका लागि अनुमति थिएन । यसपछि चेकजाँचमा खुकुलो भयो ।
क्याम्पसमा गनिसाध्य विद्यार्थी संगठनहरु छैनन् । कुन संगठनको विद्यार्थी हो भनेर चिन्ने कुरै आएन । मतदाताका लागि प्रतिनिधि नै छनौट गरेर चुनावलाई अघि बढाएका छौं । अहिले क्याम्पसमा तीन हजार पाँच सय ८१ जना विद्यार्थी मतदाताको नामावली प्रकाशन भएका छन् । यसमा सबै संगठनहरु सन्तुष्टि नै छन् । उनीहरुको विवादका कारण क्याम्पसमा तालाबन्दी भइरहेको छ । तालाबन्दी कति गरिसके गनिसाध्य छैन । आज उम्मेद्वारहरुको छनौट गरिसक्ने भनेर यहाँ बसिरहेका छौं । आज नै चुनावसम्बन्धि विद्यार्थी संगठनहरुसँग बसेर छलफल गर्दैछौँ ।
सर्वाेच्चको न्यायाधिशमा एमाओवादीले भाग खोज्यो, सभामुखले गौडा रोकिन
प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतको अंकुश